नेप्से १४१३ विन्दुमा | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर नेप्से १४१३ विन्दुमा
मुख्य खबर, लगानी 56 views
नेप्से १४१३ विन्दुमा
फागुन ६, काठमाडौं (अस) । साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ७८ प्रतिशत घटेर बन्द भएको छ । यस दिन ११ दशमलव शून्य ५ अङ्क घटेर १ हजार ४ सय १३ दशमलव ९० विन्दुमा पुगेको छ । कारोबार शुरु भएको १५ मिनेटमा १७ अङ्क बढेर १ हजार ४ सय ४४ दशमलव ८५ विन्दुमा पुगेको बजार अन्त्यसम्म सो विन्दुमा टिक्न नसकि घटेर बन्द भएको छ । कारोबार भएका ९ समूहको परिसूचकमा उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ३९ प्रतिशतले बढेको छ भने बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेपछि नेप्से परिसूचक घट्न पुगेको हो ।
परिसूचक घटेका ८ समूहको परिसूचकमा जलविद्युत कम्पनीको १ दशमलव ८८ प्रतिशत, होटलको १ दशमलव ८४, लघुवित्तको १ दशमलव ७६, बीमाको १ दशमलव ४७, विकास बैङ्कको १ दशमलव ३२, वित्तको १ दशमलव १४, ‘अन्य’ समूहको १ दशमलव ३ प्रतिशत र बैङ्किङको शून्य दशमलव २३ प्रतिशत घटेको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क लिमिटेडको प्रतिकित्ता रू. ६ सय ८७ मा रू. २ करोड ८१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कारोबार भएका १ सय ५९ कम्पनीको ७ हजार १ सय ८२ पटकको व्यापारमा १४ लाख २९ हजार ३ सय ५९ कित्ता शेयरको रू. ५९ करोड ६ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
१२ बैशाख २०७५, बुधबार १०:३६
१३ वाणिज्य बैङ्कको नाफा १४.३२% वृद्धि